Wednesday December 06, 2017 - 19:49:07 in Wararka by Editor Caynaba News
LOndon(CYN)Xiriirka kubada cagta Ingariiska ayaa ganaax lacageed oo gaaraya sideed kun ginni waxa ay duldhigeen tababaraha kooxda Chelsea
Antonio Conte ka dib markii uu qirtay inuu si xun u dhaqmay taasoo keentay casaankii la siiyay kulankii Swansea ay ka badiyeen.
"Tababaraha Chelsea Antonio Conte waxaa lagu ganaaxay lacag gaareysa sideed kun ginni ka dib markii uu aqbalay dacwadii ay ku soo xoogtay FA-ga” ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay xiriirka kubada cagta Ingariiska.
"Ganaaxan waxa uu daba socdaa casaankii la siiyay kulankii Swansea City ee 29kii bishii November.”Conte ayaa raaligelin ka bixiyay sida uu u dhaqmay ka dib ciyaartaas iyadoo Chelsea ay 1-0 ku badisay kulankaas ka dib gool uu u dhaliyay Antonio Rudiger.
"Waxaan arkayay kooxda naga soo horjeeda oo waqti dhumis sameyneysa, waaan sababta aan dhowr jeer u la hadlay garsooraha afaraad.” ayuu Antonio Conte u sheegay Sky Sports.
"Ma aanan arkeynin xaalada waqti dhumiska oo isbedeleysa, waxaana ku xanaaqay garsooraha afaraad. Sababtaas darteed, waxaa qasab inaan raaligeliyo isaga iyo garsooraha dhexe. Waqtigaas waan careysnaa, laakiin waan ogahay inay tahay wax sah ah inaan iyaga raaligeliyo.
"Inuu go’aanka cadaalad ahaa ma garanayo, laakiin garsooraha go’aanka wuu qaatay, sababtaas darteed waa inaan aqbalno oo ixtiraamno go’aankiisa.
"Ma ahan wax sahlan, mararka qaar inta ciyaarta socoto waxaa jira jahwareer badan, laakiin waxaan qabaa inaad sameyn karto qalad, waana sameeyay.
"Shaqada tababare ma ahan mid sahlan. Shaqadeena waa inaan kursiga keydka joogno oo aan la dhibtoono ciyaartoydeena. Xilli ciyaareedkan waa ay adag tahay marka qaar in xasilooni lagu joogo kursiga keydka.”